Garsoore Dumar Ah Oo Champions League Qabatay & Ciyaaryahan Ayaa Shaaciyay Xiriirkooda Jaceyl - Laacib
HomeWararka Champions LeagueGarsoore Dumar Ah Oo Champions League Qabatay & Ciyaaryahan Ayaa Shaaciyay Xiriirkooda Jaceyl
Garsoore Dumar Ah Oo Champions League Qabatay & Ciyaaryahan Ayaa Shaaciyay Xiriirkooda Jaceyl
January 3, 2022 Saed Mohamed
Daafaca kooxda reer Holland FC Emmenee lagu magacaabo Jeff Havdeveld iyo garsoore afaraad Shona Shukrula ayaa ku dhawaaqay in xiriir jaceyl uu ka dhaxeeyo afar bilood ka dib markii ay ku kulmeen kulan ka tirsanaa horyaalka heerka labaad ee Holland.
13kii bishii Agoosto 2021, kooxda wacdaraha dhigeysa ee FC Emmen ayaa la ciyaartay kooxda FC Eindhoven horyaalka Ereste Divisie.
Shukrula oo garsoore ka ah wadanka Holland tan iyo xilli ciyaareedkii 2009-10 ayaa garsoore afaraad ka aheyd kulanka horyaalka heerka labaad iyadoo daafaca garab Hardeveld uu ciyaaray inkastoo casaan la siiyay daqiiqadii 91aad.
FC Emmen ayaa maalintaas ay guuldarro laam filaan ah ka soo gaartay Eindhoven laakiin waxay maalin muhiim ah u aheyd Hardeveld iyo Shukrula.
Inkastoo uu casaan qaatay dhamaadkii ciyaarta, 26 jirkaan ayaa waxay kulmeen garsooraha afaraad iyadoo wargeyska Holland ka soo baxa ee Telegraaf uu sheegay inay aheyd markii ugu horeysay ee ay is arkaan.
Afar bilood ka dib lamaanahaan ayaa baraha bulshada ku shaaciyay xiriirkooda ka dib markii ay dabaaldega sannadka cusub u aadeen magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. “Waa Rasmi aniga iyo Jeff ” ayay Shona ku soo qortay Instagram.
Halka Hardeveld uu isna sawir labadooda ah soo dhigay baraha bulshada.
Shukrula ayaa ka mid ah garsoorayaasha aadka loo qiimeeyo ee kubada cagta Holland.
Waxay sidoo kale garsoore afaraad ka aheyd kulamo Champions League ah, Koobka Qaramada Yurub iyo isreebreebka Koobka Adduunka.